FACEBOOK VIRUS ကာကွယ်နည်း (၅) မျိုး | Ta Pwint Pan
FACEBOOK VIRUS ကာကွယ်နည်း (၅) မျိုး
Facebook ဆိုတာ User ပေါင်းသန်းငါးရာလောက်နဲ့ ပါတဲ့ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး Socail Network ကြီးဆိုတော့ Malware တွေ Spam Mail တွေ Virus တွေအတွက် တော့ ပစ်ကွင်းကောင်းကြီးပေါ့ဗျာ.။အဲ့လို Virus တွေဟာ Video တွေ Notes တွေ ပြီးတော့ application တွေ အို ကုန်ကုန် ပြောမယ်ဗျာ Link တွေကနေတောင် ၀င်နိုင်ပါတယ် ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အထူးပြောချင်တာကတော့ Malware တွေနဲ့ Trojen တွေပါ… အဲ့ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဆိုရင်…….။
၁. Think Before you Act
Facebook ကဗိုင်းရပ်စ်တွေက မထင်မှတ်တဲ့နေရာကတောင် ရောက်လာ နိုင်ပါတယ်..။ အထူးသဖြင့် Application တွေပေါ့ဗျာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်က Application Invite လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင် သေချာစဉ်းစားပြီးမှ လုပ်တဲ့..တိုက်ဆိုင်လို့ ပြောပါဦးမယ် ဒီကိစ္စက Facebook မှာတင် မကဘူး နေရာတိုင်းမှာ Think Before Act က ဆောင် သင့်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အ Hack မခံရအောင် ကာကွယ်ဖို့ က ဒီနည်းက နည်းလမ်းကောင်းလေ…။ ဥပမာ လင့်ခ်တစ်ခုကို ၀င်လိုက်လို့ Gmail Login Page ပေါ်တာနဲ့ ပက်စ်ဝက်ရိုက်လိုက်ရင် Phishing စာမိသွားမှာပေါ့.. ထိုင်နေရမယ့်ပုံ )
၂. Try to avoid Links and videos with Catchy words like “funniest ever,” “most hilarious video on Facebook,” or “you’ve got to see this ရှင်းရှင်းလေးပါ သိပ်ပြီး ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
၃. Check the poster of the Suspicious content
ဒါကျတော့ Noteတွေကိုပြောတာဗျ ။.ဘယ် Note ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ရေးတဲ့လူ သေချာမသိရင် မနှိပ်စေချင်ဘူးတဲ့ဗျာ..။
၄.Avoid messages that have been posted by multiple users
Facebook Virus ဟာ ကျွန်တော်တို့ Friend တွေဆီမှာတောင် ကူးစက်ခံနေရနိုင်ပါတယ်..။ ( ဗိုင်းရပ်စ် ဆို ပေမယ့် Malware တွေပိုများပါတယ် )အဲ့ဒီ့ Malware တွေဟာ တကယ့်သူငယ်ချင်းက မ Tag ပဲ ကျွန်တော် တို့ Wall မှာ Tag အဖြစ်နဲ့ ရောက်ရှိနေပြီး ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကူးစက်ခံရပါသတဲ့..။
၅. Do not fall for the “typical” money-transfer schemes
Facebook Chat ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် Bank Acc ပက်စ်ဝက်တွေ ပေးတာ ငွေလွှဲတာကို မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ Malware တွေအသင့်နေရာယူပြီးဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ပါတဲ့ ခင်ဗျာ..။
၆. Update your anti-virus software frequently
ဒါကတော့ မထူးဆန်းလှပါဘူး ပုံမှန် Update လုပ်ပေါ့ဗျာ
Ethical Hacking Website တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရလို့ လိုမယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ဘာသာပြန် ပို့စ်ဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်ရတာ တစ်မျိုး ကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်..။
Relink : မှော်ဆရာအဖွဲ့ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
← Gtalk အကျိုးပြု အသုံးချ Bot အကောင့်များ။
အမျိုးသားတို့ အထင်ကြီး၊သဘောကျအောင် မမတို့ ဆောင်ရန် ၁၃ ချက် →